Maxay Itoobiya qarka ugu saaran tahay inay burburto? - Jigjiga Online
HomeSomalidaMaxay Itoobiya qarka ugu saaran tahay inay burburto?
Itoobiya waxay u muuqataa inay qarka u saaran tahay dagaal sokeeye. Dagaalka u dhexeeya xoogagga daacadda u ah dolwadda dhexe ee uu hoggaamiya Abiy Axmed iyo Jabhadda OLF ayaa galaaftay nolosha boqolaal qof, dalkana qarka u saaray inuu burburo.
Dowladda Addis Ababa iyo TPLF ayaa midba midka kale ku eedeynaya inu colaada billabay. Abiy Axmed wuxuu ku dooday in TPLF ay laayeen askar dowladda ka tirsan.
Hoggamiyaha Tigreega Debretsion Gebremichael ayaa sheegay in ciidammada gaarka ah ee Itoobiya iyo kuwa dalka deriska la ah ee Eritriya oo wada socda ay weerar ku so qaadeen gobolkiisa.
Ilaa iyo inta ay ka so baxayaan baritaanno madaxbanaan, waxay u muuqataa inay sii socon doonaan eeeymahan ay labada dhinac isu jeedinayaan si ay tagaaero gudaha iyo mid dibadda ah u kasbadaan.
Labada dhinac ayaa siyaaba kala duwan u arka taariikhda dalkaasi Itoobiya.
Boqorkii Haile Selassie ayaa kacdoon xukunka looga tuuray 1974. Xukunkii milatari ee loo yaqaannay Derg ayaa awoodda la wareegay.
Waxaa ka dhshay collaadaasi dhacdadii loogu magac daray “Argagixii casaa” markaas oo xukunkii milatari uu laayay tobanaan kun o dhallinyaro ah.
Tigreega waxay u yaqaanaan sanadihii mugdiga. Duqeynta joogtada ah ee diyaaradaha ayaa ku khasbay inay habeenkii oo kali ah dibedda u baxaan. waxaa ka mid ahaa duqeyn ka dhacday 1988 magaalada Hausien oo 1,800 oo qof ay ku dhinteen oo u badnaa dad suuq ka adeeganayay.
Isbaheysi ay TPLF hoggaaminaysay oo loogu maga daray EPRDF ayaa ugu dambeyntii xukunka ka tuuray dowladdii milatariga sanaddii 1991.
Maalinkii uu xilka la wareegay ayaa hoggaamiyihii EPRDF Meles Zenawi, oo u dhashay Tigreega ayaa sheegay in mudnaantiisa koobaad ay tahay in dadka Itoobiyaanka ay helaan saddexda wakhti cunto ay cunaan.
27 sano ee EPRDF ay xilka haysay waxaa la soo afjaray macluusha iyo dagaalkii sokeeye ee muddada socday.
Balse itoobiya ma arag wax dimuqraadiyad ah. Ra’iisal wasaare Abiy Axmed iyo taagerayaashiisa waxay taasi ugu yeeraan 27 sano oo mugdi ah.
Jiilal soo kacayay oo dhallinyaro ah ayaa daremay in la cubburiyay.
Waxay ku doodayaan in qowmiyadda Tigreega ay gacanta ku dhigeen siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciidanka si ay iyaga uga faa’iideystaan.
Abiy Axmed, oo ka so jeeda qowmiyadda Oromada ayay EPRDF u doortay inuu noqdo hogaamiye xisbi iyo ra’iisal wasaare sanaddii 2018-kii.
Si deg deg ah ayuu u furfuray siyaasaadda dalka. Xisbigii EPRDF ayuu kala diray, wuxuuna alkumay mid cusub oo loogu magac daray Xisbiga Barwaaqada.
Tallaabooyinkan ayuu ku muteystay taageera badan.
Mr Abiy ayaa heshiis nabadeed la saxiixday Eritrea taaso u horseeday inuu ku guuleysta abaalmarinta caalamiga ah ee Nadda.
Shaki kuma jira inuu taageero ballaaran ka haysta Amxaarada ku sugan caasimadda iyo gobolka Amxaara. Balse ilaa iyo hadda wax tijaabo doorasho ah ma gelin isaga iyo xisbigiisa toona.
Mr Abiy ayaa sheegay in TPLF ay khadka cas ka tillaabsatay markii ay doorashooyin gobolka Tigray ka qabatay bishii September.
Dolwadda federaalka doorashadaasi ma aqoonsanin kamana aysan qeyb qaadanin.
Doorashooyinka qaran ee dalkaasi ayaa lagu waday inay qabsoomaan horraantii sanadkan balse dib ayaa loo dhigay sababa la xiriira xannuunka Covid19. Wakhtigii dowladda ayaa dhammaaday, waxayna maamulayaasha gobolka Tigray ku doodeen in iyaga oo kali ah ay xalaal yihiin maadama ay ku joogaan cod dadweyne.
Dalkan wuxuu ku dhaqmaa nidaam federaal ah oo qowmiyadaha ay ka taliyaan gobolladooda.
Waxaa nidaamkaasi la meelmariyay sanadkii 1994 markii EPRDF ay xukunka la wareegtay. Mr Abiy ayaa haseyeshee doonaya inuu nidaamkaasi meesha ka saara.
Nidaamka federalka ayaa o oggolaanaya in gobollada ay goosan karaan. Waxaa mar sidaasi dalbaday hoggaamiyayaasha Oromada oo ah qowmiyadda ugu ballaaran dalka.
TPLF Ma aysan dalbanin inay gooni u go’aan, balse shaki kuma jira in dagaalada hadda socda ay waddadaasi u horseedi doonaan.
Sanadkan Mr Abiy ayaa ka horyimid dhaqdhaqaaqii dhallinyarada u badnaa ee sabab u ahaa inuu awoodda la wareego.
Ka dib dilkii Fanaankii Oromada ahaa ee Hachalu Hundessa, in ka badan 150 qof ayaa ku dhimatay rabshado. Mr Abiy ayaa xabsiga u taxaabay in ka badan 10,000 oo qof.
Waxa ka mid aha a Jawar Maxamed oo hadda wajahaya eedeymo la xiriira argagixisnimo.
Burcad hubeysan oo isugu yeeray Ciidammada Xoreeynta Oromo ayaa in ka badan 50 qof oo Amxaaro ah ku dilay degmada Wollega laba isbuuc ka hor.
TPLF waxay sheegeen inay qabteen askar Eritrean ah oo so weeraray Tigray
Mr Abiy dagaalkan uu iclaamayay wuxuu ku sheegay in ujeedadiisu tahay n maamulka Tigray la hoos keeno dowladda dhexe.
ma jira qof si dhaw ula socda hawlaha Itoobiya o aaminsan inay arrintaasi suuragal tahay.
Xaaladda Itoobiya faraha ayay ka sii baxaysaa maalinba maalinta ka sii dambeysa. Kumanaan qof ayaa laga yaabaa inay ku dhimato, horsedana inay Itoobiya buburto.